ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းက ကိုဗစ်ဆေးခန်း မီးလောင်
ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့က မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည့် ကိုဗစ်ကုသရေးစခန်းကို တွေ့ရစဉ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဆက်ဘဇားဒေသက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတဲ့ ကိုဗစ်ကုသရေးစခန်းတစ်ခု ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ ညနေပိုင်းက မီးလောင်လို့ ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက အင်္ဂါနေ့မှာ သတင်း ထုတ် ပြန်ပါတယ်။
Labels: 2022, mm, ကိုဗစ်စင်တာ, မီးလောင်. သတင်း, ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်း
ကောက်ဘဇားက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို ကုသပေးနေ တဲ့ကိုဗစ်စင်တာ မီးလောင်
ကိုဗစ်ရောဂါပြင်းသူတွေကို ကုသပေးနေတဲ့အဆောင်ရော၊ ရောဂါသီးခြားစောင့်ကြည့်ဆောင်ပါ မီးထဲပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ကောက်ဘဇားခရိုင်မှာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို ကုသပေးနေတဲ့ ကိုဗစ်ကုသရေး စင် တာဟာ မနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့က မီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရုတ်တရက် လောင်တဲ့မီးကြောင့် လူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ စင်တာမှာရှိတဲ့ သံထည်ခုတင်တွေကလွဲပြီး အားလုံးနီး ပါး ပြာကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2022, mm, ကိုဗစ်စင်တာ, မီးလောင်, ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်း, ကောက်ဘဇား
- “ချေ”ဟာ ပြယုဂ်တခုလား? အာနစ်(စ်)တို ဂွေဗားရားရဲ့ ဘဝနဲ့ အတွေးအခေါ်များ
အာနစ်(စ်)တို (ချေ)ဂွေဗားရားကို ဘိုလစ်ဗီးယား စစ်သားတွေက ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၉ရက်နေ့၊ La Higuera မြို့အနီးမှာ သတ် ဖြတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ဒီစစ်ဆင်ရေးကို စီအိုင်အေနဲ့ အမေရိကန် အထူးတပ်ဖွဲ့တွေက ကြိုးကိုင်စီမံခဲ့တယ်။ ချေကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ဂုဏ်ရောင်ထွန်းပြောင်တဲ့ တော်လှန်ရေးသမား အာဇာနည်ကြီးအကြောင်း ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက် စာတမ်းတစောင် ကျနော်တို့ ပြုစုထားဖို့ ကောင်းတယ်။ ချေ ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်(၄၀)ပြည့် အခါသမယမှာ ကနဦး ရေးသားခဲ့တဲ့ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ အယ်လန်ဝု(ဒ်)က ချေ့ငယ်ဘဝက နေ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ နောက်ဆုံးနေ့အထိ ချေဂွေဗားရား ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာပုံကို လေ့ လာထားတယ်။
Labels: 2021, mm, ချေဂွေဘားရားယ အတ္တုပတ္တိ
မင်းပြားတွင် ရိုဟင်ဂျာလယ်သမားတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကောက် လိုင်းစည်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် မီးရှို့ခံရ
မင်းပြားတွင် ရိုဟင်ဂျာလယ်သမားတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ကောက်လိုင်းစည်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် မီးရှို့ခံရတယ်လို့ Western News ထဲမှာပါလာတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများကို ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိ ပစ်မှတ်ထား မီးရှို့ဖျက်စီးတာတွေလွန်ခဲ့တဲ့ လ အနည်းငယ်စပြီး အစီစဉ်တကျလုပ်လာတာတွေ့ရပတယ်။
Labels: 2021, mm, မင်းပြား, မီးရှို့ခံရ, ရိုဟင်ဂျာလယ်သမား, သတင်း